Inweta ego trang web na blog gị ọ biến mfe ụụ ego karia ịmalite azụmah Thung omenala ma ị gaghị eleba iwu iwu mkpochapụ anya ma ọ bụ tinye maka ikikere ụ.
Otú ọ, nke ahụ apụtaghị na iwu adịghị mkpa ịkwesịrị ime.
Otu n’ime iwu iwu kachasị mkpa ma biến mkpa bụ iwu nzuzo, nke a na-emetụta weebụsaịtị, nnukwu ma ọ bụ obere. Ọ bụrụ na ị bụ obere azụmah Thung ma ọ bụ ọbụnadị blogger na-enweghị ego trang web na ebe nrụọrụ weebụ gị ma ejighị n’aka ihe kpatara ụwa na mb.
Ohere dị elu nke na ị ga – adị (ọ bụrụgodị na ị maghị ya) – ichikota ụdị ozi thôi iche iche trang web na ndị ọb Thiêu, na – edebe ha nchịk. Maka ọt Dropụ n’ime ihe omume ndị a, ohere ndị nghịch elu dị elu na achọrọ ka ị nwee iwu nzuzo.
1.1 Dữ liệu = Bản ngã
1.2 Iwu nzuzo na mba thường iche iche
Ihe obula a choro bu dabere na iwu ma obu iwu ndi ozo. Ọzọkwa, nkọwa nke ihe bụ "ozi nkeonwe" dịgasị, mana ọ na-agụnye aha na adreesị email, na mgbe ụfọdụ, adreesị IP na kuki nchọgharị.
Dữ liệu = Bản ngã
Na oge ọmụma, dữ liệu bụ ego ọhụrụ. Ozi nzuzo nke ndị mmadụ n’otu n’otu bara ezigbo uru nye ndị mgbasa ozi, ụlọ ọrụ, na gọọmentị.
Taa, ọt, và mba na-eleba anya na nzuzo, ka ka ikike bù mkpa nke ụmụ mmadụ, ha agafewokwa iwu iji chebe ndị mmadụ trang web n’ihe ọmụma ha na-anak Iwu nzuzo nzuzo na-achọkarị na onye ọ bụla na-anakọta ozi nkeonwe trang web na ebe nrụọrụ weebụ ha ga-enwe nkwupụta na otu na ihe kpatara ha ji eme ya.
, Tôi không phải là người khác, tôi cũng là một người khác.
Iwu nzuzo na mba thường iche iche
Iwu Nzuzo Úc (Ứng dụng) bụ nchịkọta nke ụkpụrụ 13 na-eduzi njikwa ozi nkeonwe. Dịka ụkpụrụ ndị a si biến, ị ghaghị ijikwa ozi nkeonwe na ụzọ a na-emeghe na nke a na-emeghe.
Dữ liệu Ntuziaka nchekwa nke Dữ liệu Liên minh Châu Âu 1998 ekwu na onye ọ bụla nhazi dữ liệu nke onwe ya aghaghị ime ya n’ụzọ ziri ezi ma kwadoro. Iji mee ka nchịkọta data weere ya dị ka iwu kwadoro, một dữ liệu ga-anakọta nanị maka akọwapụtara nke ọma, nke doro anya na nke ziri ezi.
Nzuzo UK na Usoro Ntanetị Điện tử 2003 na-egbochi ojiji nke kuki na teknụzụ ndị yiri ya na ngwaọrụ ndị ọrụ ọ gwụla ma ndị ọrụ 1) doro anya banyere nzube nke ojiji nke kuki na 2).
Tinye ọrụ (ntụgharị Google Adsense) ị na-eji na ụdị dữ liệu ị na-anakọta,
* P Thung onyinyo iji gbasaa.
Ịmepụta nzuzo nzuzo na asụsụ asatọ bình thường iche iche maka ebe nrụọrụ weebụ na ngwa ọdịnala na-eji Iubenda (lee ngosi).
Kar Thung ọrụ 600, gụnyere Facebook Like, Google Adsense, Google Analytics, nút LinkedIn, Twitter, Alexa Metrics, Amazon Associates; edozi ya na usoro ozo.
Azịza nkwụsị – Ee. Iubenda na-enye ngw Cầua zuru oke iji soro GDPR.
Na ego nke $ 39 / tháng (ouch!), Usoro ahụ ga-enyere aka:
Shopify na-enye ngwá ọrụ biến mfe ebe ị nwere ike ịmepụta nkwụghachi ụgwọ na usoro nke iwu ọrụ maka n’efu.
Ị nwere ike nhịp điệu "Hụ na ị ga-achọ ikpe ikpe" igbe ma mepụta iwu nzuzo gị n’efu.
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịdị ka nsogbu, iwepu akụkụ a a mkpa nke blog gị nwere ike ibute nsogbu n’ọnọdụ. Reallychọghị ihe ọ bụla ọọrọ ka amachibido ya na netwọkụ Mgbakwunye gị ma ọ bụ ịbụ onye onye ọb web websaịtị na-agba akwụkwọ.
Chebe onwe gị trang na iji otu n’ime ngwaọrụ ndị dị n’elu iji mepụta iwu nzuzo gị ugbu a, ị gaghị echegbu onwe gị! Usoro ahụ ga-enyekwara gị aka ịmata onwe gị na nkọwa bara uru na nzuzo onye ọrụ.
Kedu otu na ihe kpatara tinye akwukwo akwukwo ndi ozo na akwukwo gi